I Enoka ny niakarany | Apg29
I Enoka ny niakarany
Toy ny tamin'i Enoka. "Tsy nahita azy intsony izy." Izy fotsiny Tsy hita popòka.
Toy ny tamin'i Enoka. "Tsy nahita azy intsony izy." Izy fotsiny Tsy hita popòka. Dia ho toy izany i Jesosy, rehefa retrieves ny fianakaviany eto an-tany. Amin'ny ankavia ihany jereonareo fa olona tampoka intsony.
Nirenireny tany fiombonana amin'Andriamanitra
I Enoka, ilay fahafito nandimby an'i Adama dia lehilahy izay nandeha tamin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Ny fiainany rehetra ho ny sitrapon'ny Tompo. Izao no voalaza momba azy ao amin'ny KJV, Hebrews. 11: 5:
"Finoana no namindrana an'i Enoka nalaina ka mba tsy hahita fahafatesana, ka nahita azy intsony, satria nalain'Andriamanitra izy. Fa raha mbola tsy nentina izy, dia nanana fijoroana ho vavolombelona izay sitrak'Andriamanitra. "
I Enoka tsy maty
Ny olo-marina i Abela, araka ny voarakitra ao amin'ny andininy teo aloha dia namono ny rahalahiny i Kaina, ary maty noho ny finoany. Fa i Enoka Tsy maty mihitsy.
Ao nuBibeln nilaza hoe: "ianao tsy nahita azy," ary ao amin'ny fandikan-teny 1917: 'Nahita azy intsony. "
Fa tsy nahita i Enoka, na dia izy maintsy midika izany hoe izy ireo nitady azy, fa tsy nahomby. Izy ary mbola tsy hita popoka.
Rehefa mitranga ny fampakarana, vahoaka tsy tambo isaina ny olona ny mamantatra hanjavona eto an-tany. Izy io dia ny famonjena vahoaka fa i Jesosy no naka. Hisy korontana eto an-tany. Maro ireo olona no malahelo ny fianakaviany. Ireo izay efa sisa dia hikaroka anatin'ny fitaintainana noho ny olon-tiany.
Anefa izy ireo, dia tsy nahita. Ireo no hitomany ka hanao hoe: "Aiza no ray aman-dreny?", "Aiza no zanako?", "Aiza no rahalahiko?" Aiza no namako? "
Maro no tsy vonona
Maro ny olona dia tsy ho vonona rehefa mitranga ny fampakarana, na rendremana, milaza ny Kristianina. Mety ho nieritreritra izy ireo fa ny reny ny vavaka sy ny fiainana marina Ray afaka manampy azy ireo ho any an-danitra. Na fa ampy ho ara-pivavahana amin'ny ankapobeny, tsara fanahy sy tsara ary manao araka izay tsara indrindra azony natao.
Ny Baiboly fa "Finoana no notanana Enoka." Mba handeha hiaraka Jesosy retrieves ny fianakaviany eto an-tany dia tsy maintsy manana finoana velona ao amin'i Kristy. Tsy maintsy efa nandray Azy ho Mpamonjy azy. Dia naka i Enoka satria "nandeha tamin'ny firaisana tamin'Andriamanitra," ary "izay sitrak'Andriamanitra."
Milaza ny Baiboly fa telo lanitra nandehanany: Enoka ny niakarany, ny mpaminany Elia niakarany, ary ny fiakarany Jesosy. Isika izay isan 'ny vahoaka voavotra dia niakarany koa, i Jesosy mitsoaka antsika amin'ny alalan'ny fampakarana.